यौ´न उत्तेजना बढाउने औषधि के–के हुन् : यसले कसरी काम गर्छ ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/यौ´न उत्तेजना बढाउने औषधि के–के हुन् : यसले कसरी काम गर्छ ?
51,213 1 minute read
सिनामंगल स्थित सडकमा कम चहलपहल थियो । मध्यान्हको घामका कारण मानिसहरु उतिसारो सडकमा थिएनन् । त्यही नजिकै रहेको एउटा औषधि पसलमा एक युवक पसलेसँग जोडतोडले कुरा गरिरहेका थिए । ‘जे पायो त्यहीं गफ दिने, ८ हजार तिरेको के काम’ उनी जङ्गिए । पसलले आफ्नो कुराम मनाउने प्रयास गरिरहेको थिए । ध्यान त्यतै केन्द्रीत हुन्छ । ति युवकले ८ हजार तिरेर यौन शक्ति बढाउने कफी किनेका रहेछन् । त्यसले काम नगरेपछि पैसा फिर्ता दिन पसलेसँग जोड गर्दै थिए । उक्त कफी पिएमा यौन क्षमता र चाहना दुबै बढ्ने र सोको प्रभाव १५ मिनेटमै देखिने भएपछि कफी खरिद गरेका थिए । कफीको प्रभावको परीक्षण आफ्नै प्रेमिकालाई गरे तर कुनै असर देखिएन । उनको बुझाइमा प्रेमिका शारीरिक सम्बन्धका लागि तयार भइनन् । योजना सफल नभएपछि उनी पैसा फिर्ता माग्न आएका थिए । पसलेले बढी कुरा गर्ने भन्दै प्रतिवाद गरिरहेका थिए ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
झारफुक गर्ने बहानामा पुजारीको घि’नला’ग्दो खेल, २ महिलालाई कुटिमै बोलाएर …..
शैक्षिक सत्र नबिग्रिनेगरी यस्तो नयाँ क्यालेन्डर बनाउँने सरकारको तयारी